Yakakurudzira maitiro ekurapa ma broilers
ne admin pane 21-09-27
1. 1-7days yekare: mushonga unotonhora: 0.2ml / pc yekutanga kunwa. shandisa kwemazuva matatu kusvika ku5-5 mazuva ekutanga: proventriculitis mushonga: 500g sanganisa 100 kg chikafu. Shandisa kwemazuva mashanu uchienderera. Kudzivirira uye kurapwa: Kuvandudza kusagadzikana kwemuviri, adenomyosis gastritis, kurerutsa kudzvinyirira immune, uye kuona ...
Kukosha kwemushonga kwemhuka dzesango kwakaderera uye njodzi yakakwira. Kuvandudzwa kwemishonga yemakwenzi neyekugadzira kunogona kubatsira kugadzirisa dambudziko riri mumaindasitiri
“Pakazara, pane marudzi gumi nemazana masere makumi masere neshanu ezvigadzirwa zvemushonga zveChinese nemhando yemishonga yemhuka inokwana chiuru nemazana mashanu ane mazana masere neshanu, zvinosvika zvikamu gumi nezviviri kubva muzana. Pakati pezvinhu izvi, mazana gumi nematanhatu emhuka dzesango ari panjodzi. Pakati pawo, chipembere, runyanga bone, musk uye bere bile upfu hunofungidzirwa kunge husingawanzo mhuka ...
Muchokwadi, iko zvino musika wehuku kupora kunogona zvakare kuverenga. Mutengo wezvigadzirwa zvehuku zvakawanda wasvika padanho renguva imwechete mumakore apfuura, mamwe anga ari pamusoro kunyangwe kupfuura mutengo wepakati mumakore apfuura. Asi kunyangwe zvakadaro, vanhu vazhinji havasati vakurudzirwa kubereka, ndizvo zvakanaka ...
Musiyano uripo pakati pemakomputa feed uye premix feed
Varimi muhuku kuti vasarudze chikafu kana chiri, maererano nemhando dzakasiyana dzehuku, kukura kwemamiriro ekusarudza. Maitiro ekusarudza emuviri anodikanwa ndeaya anotevera: Kompuru feed ndeye rudzi rwechigadzirwa chigadzirwa neunifomu uye hwakakwana hutano kukosha maererano nemhando dzakasiyana ...